दैनिक दिसा लाग्दैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Esewanews
Home / Headline / दैनिक दिसा लाग्दैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
Shivaram Khadka Headline, शिक्षा/स्वास्थ्य Leaveacomment 7968 Views
हाम्रो स्वस्थ्य हाम्रै हातमा रहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा देखिने समस्यालाई समयमनै पहिचान गरी सहि उपाय अपनाउन सकेका हामी निरोगी भई लामो समयसम्म जीवन बिताउन सक्छौं। पछिल्लो समयमा शरीरमा देखापर्ने समस्या मध्ये सबैभन्दा शरीरलाई देखापर्ने समस्या पेटसगँ सम्बन्धी समस्या हो।
पेटमा खराबीपना भएमा ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सर लगायतका अन्य रोगले समाउँछ ।सबैको चाहना सुन्दर बनौं भन्ने हुन्छ। सुन्दर रहनको लागी पनि पेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
पेटमा फोहोर वा खराबीपना छ भने त्वचामा पनि र कपालमा समस्या सिर्जना जस्तै त्वचामा कालो दाग धब्बा, कपाल झरेर पातलो हुने, कपाल वा अनुहार रुखो देखिने आदि। पेटलाई सदैव सफा राख्नको लागी जस्तो सुकै दिसालाई निकाल्न जरुरी छ।